Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica Udibana noMkomishinala oPhezulu waseCanada eJamaica
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica Udibana noMkomishinala oPhezulu waseCanada eJamaica
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Caribbean • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
UMkomishinala oPhezulu waseCanada eJamaica nakuMphathiswa Wezokhenketho waseJamaica
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett, ubeka uMkomishinala oPhezulu wase-Canada osandula ukumiselwa eJamaica, uHloniphekileyo u-Emina Tudakovic, (jonga ngasekhohlo emfanekisweni) ngomqondiso okhethekileyo wokubonga.
U-Tudakovic oHloniphekileyo wadibana ne-Hon. UMphathiswa uBartlett kwii-Ofisi zakhe eNtsha eKingston.
Baxoxe ngeendlela zokuqinisa ubudlelwane phakathi kwamazwe omabini kwiindawo ezinje ngemfundo noqeqesho.
Kwakukwitafile ekwakunokwenzeka ukuba iCanada isebenzisane neJamaica ukuvula iziko lesathelayithi yeGlobal Resilience kunye neZiko loLawulo lweCrisis.
Lo msitho wawubizelwe imbeko ngu-Obalaseleyo Tudakovic kuMphathiswa nge-11 ka-Agasti 2021, kwii-Ofisi zakhe zaseNew Kingston.
Ngexesha lentlanganiso yabo, baxoxe ngeendlela zokuqinisa ubudlelwane phakathi kwamazwe omabini kwiindawo ezinje ngemfundo noqeqesho. Baye baxoxa malunga nokwenzeka kweCanada ukuba ibambisane neJamaica ukuvula iziko lesathelayithi yeGlobal Resilience kunye neZiko loLawulo lweNtlekele.
The Jameyikha Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho kunye neearhente zalo zikwiphulo lokuphucula kunye nokuguqula imveliso yezokhenketho yaseJamaica, ngelixa liqinisekisa ukuba izibonelelo ezivela kwicandelo lokhenketho ziyonyuswa kubo bonke abantu baseJamaica. Ukuza kuthi ga ngoku iphumeze imigaqo-nkqubo kunye nezicwangciso eziya kuthi zibonelele ngamandla kwezokhenketho njengenjini yokukhula koqoqosho lwaseJamaican. ICandelo loMphathiswa lisazimisele ekuqinisekiseni ukuba icandelo lezokhenketho lenza elona galelo lipheleleyo kuJamaica kuphuhliso lwezoqoqosho ngenxa yomvuzo omkhulu.
Olunye ulwazi malunga neJamaica.
Oktobha 20, 2021 kwi-13: 38
Usetyenziso olungakumbi nge- شات عراقي